Fotoan-dehibe miaraka amin'ny namako - Ny Teny fototra • Fanontaniana sy valiny
"Fotoam-bavaka miaraka amin'ny namana" dia singa Q & A The Teny gazety. Teo anelanelan'ny 1906 sy 1916 dia ireto fanontaniana manaraka ireto no napetraky ny mpamaky The Teny ary novalian'i Mr. Percival. Ny daty etsy ambany dia misy rohy mankany amin'ny tsirairay amin'ny PDF izay ahitana ireo fanontaniana sy valiny tany am-boalohany ireo averina tsy voavaha. Mba hitahiry ny maha-ara-tantara azy, misy hadisoana mahazatra hitazonana sy ny fampiasana ny fiantsoana malaza mandritra izany fotoana izany. Kitiho ny daty asongadina etsy ambany mba hahazoana ny valin'ny fanontaniana tsirairay voatanisa amin'ity daty ity.
Ahoana no ahafahantsika milaza ny momba antsika tamin'ny fotoana naha-nofo farany antsika?
Azontsika atao ve ny milaza hoe impiry isika no teraka?
Mahatsiaro tena eo anelanelan'ny fahaterahana indray isika?
Inona no hevitra teôsôjika momba ny fananganana an'i Adama sy Eva?
Manao ahoana ny halavan'ny fotoana voatondro eo anelanelan'ny reincarnations, raha misy fotoana voafaritra?
Manova ny toetrantsika ve rehefa miverina eto an-tany isika?
Misy mpahay teolojia mino ny finoanoam-poana ve?
Inona no fototry ny finoanoam-poana fa ny olona teraka miaraka amin'ny "caul" dia mety manana fakana ara-tsaina na herin'ny maizina?
Enga anie 1906:
Nahoana no tsara kokoa ny fanasitranana ny vatana taorian'ny nahafatesany fa tsy nandevina azy?
Misy fahamarinana ve ao amin'ireo tantara izay vakintsika na andrenesantsika momba ny vampire sy ny vampirema?
Inona no antony mahatonga ny fahafatesan'ny olona tampoka eo amin'ny tanora na eo amin'ny fiainany voalohany, rehefa hita fa taona maro mahasoa sy fitomboana, saina sy ara-batana no eo anoloan'izy ireo?
Raha toa ka tsy voakilasy ny sandrin'ny astral, ny tongotra, na ny mpikambana hafa ao amin'ny vatana rehefa atsofoka ny mpikambana ao amin'ny vatany dia maninona ny vatana astral no tsy afaka mamolavola tasy na tongotra hafa?
Moa ny teôlôpista ve ny mpihinam-bary na mpihinana hena?
Ahoana no ahafahan'ny vegetarisme misoroka ny fisainan'ny saina rehefa voatsindry ny vegetarisme mba hahazoana ny fifantohana?
Inona no dikan'ny dikan'ny term elementals, ampiasaina amin'ny fifandraisana maro avy amin'ny teôsophista sy mpitsangatsangana?
Inona no tiana holazaina amin'ny hoe "zon'olombelona"? Misy fahasamihafana eo aminy ve?
Misy rafitra mifehy ny faniriana, ny hafa mifehy ny herin'ny hery, ny hafa mifehy ny asan'ny vatanao, sa ny fanaraha-maso ny olombelona rehetra?
Moa ve io fifehezana io ihany no mifehy ny asa aman-draharaha sy ny asa tsy mahatsiaro ny vatana?
Manan-danja ny singa fototra amin'ny ankapobeny, ary moa ve izy rehetra na iray amin'ireo eo amin'ny fizotry ny evolisiona dia lasa lehilahy?
Azo atao ve ny mahita ny ho avy?
Moa ve tsy azo atao ny mahita ny fisehoan-javatra marina momba ny lasa sy ny zava-niseho satria mbola ho avy amin'ny ho avy izy ireo amin'ny fomba mazava sy mazava tsara rehefa mahita ny ankehitriny izy?
Ahoana no ahafahan'ny olona mahita faingam-pandeha rehefa manohitra ny zavatra iainantsika rehetra ny fahitana an'izany?
Inona avy ireo taova ampiasaina amin'ny fanairana, ary ahoana no nahatonga ny fahitana iray nafindra avy tamin'ireo zava-boaary teo an-tanany tamin'ireo lavitra sy lavitra, ary avy amin'ny fantatra hita amin'ny tsy hita maso?
Afaka mijery ny ho avy ve ny Occultista isaky ny manao izany izy, ary mampiasa fakan-tsary manaitra hanao izany?
Raha misy olon-kendry afaka manindrona ny voaly dia maninona no tsy misy olon-kafa, na mandray soa avy amin'ny fahalalany ny fisehoan-javatra hitranga?
Inona no atao hoe "maso fahatelo" ary ampiasain'ny mpanao asan'ny mpanao tononkalo izany?
Iza no mampiasa ny fihinanan-jiro, ary inona no tanjon'ny fampiasana azy?
Ahoana no misokatra ny masony fahatelo na ny pineal, ary inona no mitranga amin'ny fisokafana toy izany?
Ratsy ve ny mampiasa saina fa tsy fitaovana ara-batana hanasitranana aretina ara-batana?
Fa maninona no manjary mpanasitrana marary maro toy izany raha tsy manasitrana ny fanasitranana izy ireo, ary raha tsy izy ireo no misolo tena ny tenany, tsy hahita ny zava-misy ve ny marary?
Raha diso ny mahazo vola amin'ny fanasitranana aretina ara-batana amin'ny alàlan'ny sainy ara-tsaina, na amin'ny fanomezana ny "fampianarana ara-tsiansa", tsy diso koa ve ny mpampianatra amin'ny sekoly iray handray vola amin'ny fampianarana ny mpianatra ao amin'ireo sampan'ny fianarana?
(Ao amin'ny taratasy ho an'ny mpanonta, ny andiam-balala 1907 "Moments with Friends" dia voavaly, arahin'ny valintenin'i Mr. Percival.-Ed.)
Fantatry ny olona ve hoe aiza no misy ny foiben-toeran'ny masoandro sy ny planeta misy azy? Efa namaky aho fa angamba i Alcyone na Sirius.
Inona no antony mahatonga ny firoboroboana lehibe, toy ny afo mirehitra afo sy afo izay toa miara-misokatra avy amin'ny faritra samihafa ao an-tanàna, ary inona no mety hitranga?
Moa ve ny fiantraikan'ny planeta ampiasaina amin'ny fitantanana ny karma olombelona, ​​na ny ho aviny? Raha izany, aiza no hisy ny fahafahana?
Ao amin'ny "Moments with Friends," ao amin'ny Vol. 4, pejy 189, lazaina hoe Krismasy dia midika hoe "Ny fahaterahana ny masoandro masoandro tsy hita maso, ny Fitsipika Kristiana," izay, raha mbola mitohy, "Tokony ho teraka ao anatin'ny olombelona". Raha izany no izy dia manara-maso ny ara-batana Ny nahaterahan'i Jesosy dia tamin'ny faha-roapolo tamin'ny desambra ihany koa?
Raha tsy niaina sy nampianatra araka ny tokony ho izy i Jesoa na i Kristy, ahoana no nahatonga izany hadisoana izany nandritry ny taonjato maro ary tokony handresy ankehitriny?
Misy antony ve ny filazana ireo izay milaza fa ny fanahin'ireo lehilahy maty vady na biby?
Azonao hazavaina kokoa ve ny fomba fihevitry ny olona momba ny tontolon'ny zavaboary mba hamokarana karazam-biby isan-karazany toy ny liona, ny bear, ny paka, ny rattlesnake?(Ity fanontaniana ity dia miresaka momba ny lahatsoratr'i Percival nieritreritra.-Ed.)
Moa ve ny haizina dia ny tsy fisian'ny hazavana, sa zavatra iray misaraka amin'ny tenany ary inona no mitana ny toetran'ny fahazavana? Raha miavaka sy misaraka izy ireo, inona ny haizina ary inona no hazavana?
Enga anie 1910:
Azonao atao ve ny mijery ny hoavy ary maminavina ny hetsika hoavy?
Nahoana ny bibilava iray no heverina fa tsy mitovy amin'ny olona hafa? Indraindray ny bibilava iray dia lazaina ho solontenan'ny faharatsiana, amin'ny fotoana hafa ho mariky ny fahendrena. Nahoana ny olona no manana tahotra voajanahary toy izany?
Enga anie 1912:
Inona no mahasalama amin'ny sakafo?
Nahoana no mitovy ny fotoana?
Afaka miaina ve ny lehilahy iray, mamita ny andraikiny, ary maty ho an'ny fiainany mihoatra ny iray mandritra ny fotoana voafetra ny taona eto amin'ity tany ity?
Inona no ilaina amin'ny fitomboan'ny fanoloran-tena?
Inona no endriky ny emboka manitra, ary hafiriana no nampiasaina?
Misy tombony azo avy amin'ny fandoroana emboka manitra ve, mandritra ny fisaintsainana?
Moa ve ny voka-dratsin'ny fandoroana ditin-kazo mahatsiravina hita eny amin'ny fiaramanidina?
Enga anie 1913:
Inona no loko, metaly ary vato atolotra ireo planeta fito?
Tokony hampifanaraka ny endriky ny planeta izay nahaterahan'ny mpampiasa ny loko, metaly ary vato.
Moa ve manana loko manokana, metaly sy vato ny hatsaran-toetra miavaka, ary ahoana no ahafahan'izy ireo tsy hijery ny planeta?
Inona avy ny litera na tarehimarika mifandray amin'ny planeta?
Moa ve ny olona tiany sy tsy tiany ny fisaintsainan'ny tenany? Raha eny, ahoana no ahafantaran'izy ireo azy? Raha tsy izany, avy amin'iza ireo tia sy tsy tiany ireo?
Inona no lanjan'ny fotopampianarana momba ny sorompanavotana, ary ahoana no ahafahana mampihavana azy amin'ny lalàn'ny karma?
Inona no atao hoe fihomehezana, ary nahoana no mihomehy ny olona?
Enga anie 1915:
Inona no mandrisika antsika hanolo-tena ho amin'ny hevitsika? Aiza no ahafahantsika manohitra ny hevitsika amin'ny hafa?
Inona no atao hoe fahatsiarovana?
Inona matetika no dikan'ny hoe "fanahy" ary ahoana no tokony hampiasana ny teny hoe soul?
Moa ve ny fotopampianarana momba ny fijaliantsika eto an-tany ho toy ny famonoana karmika, amin'ny lafiny iray amin'ny fanambarana teolojika momba ny fijaliantsika ho famotsoran-keloka any amin'ny helo, fa ny fanambarana roa dia tsy maintsy ekena amin'ny finoana fotsiny; Ary, ambonin'izany, ny iray dia mitovy amin'ny iray hafa amin'ny famokarana ny tsara fitondran-tena?.